Jarmalka - Samee maraakiib badan oo leh jawi saaxiibtinimo leh adoo ku daraya shiraaca weyn. Keydso shidaalka, hoos u dhig saliida iyo hoos u dhig kharashyada hawlgalka.
Filed Under: Xalalka Diyaarinta Tagged Iyada oo: Germany, dhoobada cirka, geynta shixnadda
Nidaamka Nalalka Qalabaynta Xalalka Qalabka Qalabka Dayrta - Nalalka Dunida
Kanada - Qiyaas ahaan bilyan milyanka dadku ma heli karaan koronto. Wareegyada fudud ee fudud ee 1.3 ayaa kor u qaadaya laydhka iyo kufilashada taleefannada gacanta.
Filed Under: Solutions Solutions Tagged Iyada oo: Canada, LED
Pankar-huyu - Semi-subterranean Mini-lagu koriyo
Peru - Qalabkan naqshadeynta aqalka dhirta lagu koriyo ayaa markii ugu horreysay lagu daabacay sagaalkii. Dhab ahaan tani ma ahan xalka super-duper ee laga filan karo. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka badan tahay abid qaab fudud oo lagu koriyo ah. Waa raqiis ah in la dhiso waxaana loo isticmaali karaa jawi aad u ba'an aduunka oo idil!
Filed Under: Guryo-beereed, Xalinta Koritaanka, Sida loo kobcin lahaa Tagged Iyada oo: Bolivia
La dagaallama nabarrada iyo xakamaynta dhirta iyo geedaha
Mareykanka - Weli ma maqashay ereyada? Xaaladdayda marnaba! Halkan waxaa ku yaal kaliya: cidhiidhiyadu waa jaanis yar oo dhulka la gooyey iyadoo biyo socda ka dib duufaan dheeraaday. Waxay keenaan nabaadiin, wax badan oo ka mid ah! Warka fiicani wuxuu noqon karaa in la xaliyo xalal aad u fudud. Waa kuwan qaar ka mid ah!
Filed Under: Solution Solutions Tagged Iyada oo: jilicsanaanta, cawska, geedaha